ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၅) – အပြာစာအုပ်များ
“ အန်တီလေး ..”
“ ဟင်..ဈန်ရ ..”
“ ညဘက် အသံတွေ ဘာတွေကြားခဲ့ရင် ကျနော့်ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်နော် ..ကျနော် လဲ နိုးနိုးကြားကြား အိပ်မှာပါ ..”
“ အင်း…ဈန်ရ လဲ သတိထားနော် ..သူခိုးလူဆိုးတွေ က လက်နက်တွေ ဘာတွေ ပါနိုင်တယ် ..”
“ ဟုတ်..အန်တီလေး ..”
ဈန်ရမောင် က အောက်ထပ် ဧည့််ခန်းထဲက ဆိုဖါ မှာ အိပ်မှာ ဖြစ် သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် အိမ်အပေါ်ထပ်ကို တက်သွား သည် ..။ သူမ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်သည့်တိုင် ရင်တုန်နေဆဲ ..။ သူမ တင်အိအိကို ဈန်ရ အခုနက ကိုင်မိသွား သည် ..။ အင်း..သူလဲ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေမှာဘဲ ..။ပါတီသွားတဲ့ အပြင် အ၀တ်အစားတွေ ကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ကာ ရေချိုးဖို့ လုပ်တော့ ၀ိုင်အရှိန်ကလဲ ရီတီတီ နဲ့ စိတ်တွေကလဲ လာနေ သည် ..။ ဈန်ရ ကို စွဲလန်းတဲ့ စိတ်က ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ကို စိုးမိုးနေသည် ..။ ရေပန်းအောက် ၀င်ပြီး တကိုယ်လုံး အနှံ့ ပွတ်သပ်ပြီး ရေချိုးတော့ သဘာဝစိတ်ကြောင့် တင်းမာပြီးထောင်ထနေတဲ့ နို့သီးဖုလေးတွေကို ကိုင်တွယ်မိ..ပွတ်သပ်မိ ရ သည် ..။ ပြီးတော့ အောက်ဘက် ကပေါင်ကြား ကို ကိုင်မိရ သည် ..။
တချိန်ထဲမှာ အိမ်အောက်ထပ်က ဧည့်ခန်း ဆိုဖါပေါ် အိပ်နေသော ဈန်ရမောင် သည် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ရဲ့ တင်အိအိကို ကိုင်မိတာကို ရင်တွေ တုန်နေဆဲ ..။ အန်တီလေး ရဲ့ တင်သားတွေ တောင့်တာ ကောင်းတာသူ ဟိုးအရင်ထဲက သိနေတာပါ ..။ အန်တီလေး ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ကိုယ်လုံးက အချိုးကျလွန်းနေတာ တခါ သူမ သီဟတို့အိမ်က ရေကူးကန်မှာ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ရေကူးပြီး ကန်ထဲက အတက်..ဈန်ရ တွေ့လိုက်ဘူးသည်..။ အဲဒီအချိန်တွေထဲက ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကို သူ ကျိတ်ပြီး သဘောကျခဲ့တာ..။ သီဟအလစ်မှာ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကို ခိုးခိုးပြီး တပ်မက်စိတ်တွေ နဲ့ ကြည့်မိရ သည် ..။ သူ ဒါတွေ မြင်ယောင် စဉ်းစားနေမိတော့ သူ့ပေါင်ကြားက လိင်တန် က ထကြွလာရသည် ..။ ရှည်ထွားလာတာမို့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ် နဲ့ အထဲမှာ ကျပ်တောက်ပြီး နေလို့မကောင်းဘူး ..။ဘောင်းဘီကို ချွတ်..အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကို လျော့ချပြီး သူ့လိင်တန်ကို ကိုင်တွယ် ဆုတ်ထားမိသည်။
တင်းကျပ်နေတာ ကို ဖြေလျော့ ပစ်လိုက်ချင်လာသည် ..။ အန်တီလေး ရဲ့ လှပတဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို စိတ်ကူး ပြီး သူ့လိင်တန်ကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ပွတ်တိုက်နေမိပြီ ..။ ဒီလို ကွင်းမတိုက်တာ ကြာနေပြီ ..။ ဧည့်ခန်းကြီး တခုလုံး မီးပိတ်ထားလို့ မှောင်နေ သည်။ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် လဲ ရေချိုးခန်းထဲက နံရံမှာ မှီထိုင်ရင်း ..သူမရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေမိသည် ..။အပျိုဖေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးယနေ့ အသက်၄၀ရှိလာသည့်တိုင် ကာမစိတ်ထကြွတိုင်း စိတ်ကို ချုပ်တီး ထိန်းသိမ်းခဲ့ရသည် ..။ တအားယား..တအားခံချင်လွန်းပြီး မနေနိုင် တော့တဲ့ အဆုံး မှာ မိမိဖါသာ ပွတ်သပ်ပြီး အာသာဖြေခဲ့ရ သည် ..။ ယောင်္ကျားစစ်စစ် တယောက် ရဲ့ လိင်တန် နဲ့ စပ်ရှက်ရတာမျိုး မဟုတ်ခဲ့လို့ တင်ပြည့်ကျပ်ပြည့်တော့ ကျေနပ်မှု မရခဲ့ပါဘူး ..။ မကြုံဘူးသေးတဲ့ ယောင်္ကျားတယောက်ရဲ့ လိင်တန်နဲ့လဲ ကြုံဘူးလိုက်ချင်စိတ်တွေက ထိန်းလို့မရချင်တော့ ..။
မိမိ သဘောကျတဲ့ ဈန်ရ လဲ မိမိ အိမ်ထဲ ရောက်၇ှိနေသည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ချုပ်တီးမြိုသိပ်ထားခဲ့ရတာတွေ ကြာလာတော့ တင်းကျပ်လာသည် ..။ ရေချိုးတာ ရပ်ပစ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်က ရေစက်ရေပေါက်တွေကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နဲ့ သေသေချာချာ သုတ်သင်လိုက်ပြီး ည၀တ်အင်္ကျီ၇ှည်ကြီးကို ၀တ် သည် ..။ ဈန်ရတယောက် အိပ်နေပြီလား မသိဘူး ..။ သူ့ကို သွားချောင်းကြည့်ချင်လာ သည် ..။ သူ မအိပ်သေးဘူး ဆိုရင်လဲ သူနဲ့ ကော်ဖီတအိုးလောက် နှပ်ပြီး အတူထိုင်သောက်ချင် သည် ..။ သူ့ရင်အုပ်ကျယ်ကျယ်..ကြွက်သားတွေ ထစ်ဖုနေတဲ့ လက်မောင်းသားတွေကို ကြည့်ပြီး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သူ့တကိုယ်လုံး ကို ပွတ်သပ်ချင်မိ သည် ..။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်နမ်းချင်မိ သည် ..။ သူ့သန်မာတဲ့ လက်တွေ နဲ့ အကိုင်ကို ခံချင်နေမိ သည် ..။
လူကို စိတ်က ဦးဆောင်သွားပြီ ..။ စိတ်သွားရင် ကိုယ်ပါ ဆိုသလိုဘဲ ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် အပေါ်ထပ် ကနေ လှေခါးအတိုင်း ဆင်းလာမိ သည် ..။ လှေခါးကို တထစ်ချင်းဆင်းနေတဲ့ သူမ ဒူးတွေ က မခိုင်ချင် ..။ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖါဆီကို တုန်ရီတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ နဲ့ လှမ်းလာမိ သည် ..။ သူမမျက်လုံးတွေ အမှောင်ထဲ ကျင့်သားရလာသောအခါ ဈန်ရကို သဲသဲကွဲကွဲ မြင်လာ သည် ..။ သူမလာနေတဲ့ဘက်ကို ဈန်ရ က ကျောပေးထားလို့ သူမကို သူ မမြင် ..။ သဲသဲမဲမဲ သူ့လိင်တန်ကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်ပွတ်တိုက်နေ သည် ..။ သူ့မျက်လုံးတွေကိုလဲ မှိတ်ထားနေသလို နုတ်ကလဲ တတွတ်တွတ် နဲ့ စကားတွေ ပြောနေသလိုဘဲ ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ဈန်ရ ဘာတွေများ ပြောနေပါလိမ့် သေသေချာချာ နားထောင်ကြည့်တော့သူမ တအား အံ့သြသွားလေ သည် ..။ ဈန်ရ သည် အန်တီလေး ..အန်တီလေး..ချစ်တယ်ဗျာ ..ချစ်တယ်…လို့..တိုးတိုးလေး ရေရွတ်ပြောဆိုနေတာ ..။သူ..သူလဲငါ့ကို စိတ်ဝင်စား..ကြိုက်နေတာပါလား …။
အမှောင်ထဲမှာ အိမ်အပြင် က မီးရောင် နဲ့ဘဲ မပီဝိုးတ၀ါး မြင်နေရတဲ့ ဈန်ရမောင် ရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို စူးစိုက်ကြည့်နေမိရင်း ..ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ရဲ့ စိတ်တွေ ပိုကြွသထက် ကြွလာရ သည် ..။ နဂိုထဲက ထနေရတဲ့ ကာမစိတ်တွေ ဟာ တရှိန်ထိုး မြင့်တက်လာ သည်။ ပေါင်ဂွဆုံက စိုနေတဲ့ အဖုတ် ထဲ ရွစိရွစိ နဲ့ လှိုက်ပြီး ယားလာသည် ..။ ခံချင်စိတ်တွေ အလွန်အမင်း ဖြစ်ပေါ်လာ သည် ..။ဈန်ရမောင် သည် လိင်တန်ကို ပွတ်တိုက်ရင်း သူ့အနောက်ဘက်မှာ တစုံတယောက် ရှိနေသလို ထင်မိလို့ အမှတ်မထင် လှည့်ကြည့်လိုက်မိ သည်။အမှောင်ထဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး ရပ်ပြီး သူ ကွင်းတိုက်နေတာကို စိုက်ကြည့်နေသော အန်တီလေး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကို တွေ့လိုက်ရ သည်။
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် က သူမနှုတ်ခမ်းပေါ်လက်ညှိုးလေး ကပ်ခါ အနားကို တိုးကပ်လာ သည်။ပြီးတော့..လေသံလေး နဲ့..“ဈန်ရ ..အန်တီလေး ကို မှန်းနေတယ် မဟုတ်လား ..” လို့ပြောလိုက်ပြီး ဆိုဖါပေါ်မှာပေါင်ကားထိုင်နေတဲ့ ဈန်ရမောင် ရဲ့ ပုခုံး ကို သူမ လက်နဲ့ ကိုင်လိုက် သည် . .။
“ ဈန်ရ ..”
“ ကြားလိုက်တယ် ..အန်တီလေး ကို ချစ်တယ်..လို့ ပြောတာ .. အဲဒါ တကယ် လားဟင်..”
“ အန်တီလေး စိတ်ဆိုးလား ..”
ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက ဈန်ရမောင်ရဲ့ ပါးပြင်ကို ထိတွေ့ပြီး ငြင်ငြင်သာသာလေး ပွတ်ပေးနေသည် ..။ “ဆိုးဘူး ..” ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် က လေသံလေး နဲ့ ပြောသည် ..။ သူမ မျက်လုံးတွေက ဈန်ရ ပေါင်ကြားက မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီး ဆီက မခွာနိုင် ..။ဈန်ရ ထိုင်နေရာ က ထရပ်လိုက်တော့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွား သည် ..။ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို စနမ်းလိုက်သလဲတော့ မသိလိုက် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ နှုတ်ခမ်းအိအိနွေးနွေးတွေ နဲ့ဈန်ရမောင် ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတို့ ဂဟေဆက် ပေါင်းစုံ မိသွားကြ သည် ..။ အနမ်းတခု ပေါက်ဖွားတော့လဲ တော်တော်နဲ့ ဒီအနမ်းက မရပ်နိုင်တော့ ..။
တယောက် နဲ့ တယောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်သိုင်းမိကြပြီး အနမ်းရှည်ကြီး က မရပ်နိုင်အောင်ဘဲ ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ခါးသိမ်လေးကို ဖက်ထားသော ဈန်ရမောင် ရဲ့ လက်က သူမ တင်ပါးအိအိကြီးတွေ ကို ပွတ်သပ်နေမိ သည်။စောစောကလို မတော်တဆ ကိုင်တွယ်မိတာ မဟုတ်တော့ ..။ည၀တ်အင်္ကျီပါးလေး တထပ်ထဲ ၀တ်ထားသော ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ရင်ဘတ် နဲ့ ဈန်ရ ရင်ဘတ်တို့ တသားထဲကျအောင် ပူးကပ်နေမိကြတာကြောင့် တင်းမာပြီး သိသိသာသာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ရင်သားများ ရဲ့ အထိအတွေ့ ကို ဈန်ရ သဘောကျမိနေ သည် ..။သူ သည် ဒီကမ္ဘာမှာ အလွန်ဘဲ ကံထူးသူတယောက်ပါလား ဆိုတဲ့ အသိကခေါင်းထဲ ၀င်လာ သည်။
ဒီလောက်ဖြူဖွေးနုသန့် ချောမောလှပတဲ့ မိန်းမတယောက် နဲ့ အခုလို နမ်းစုတ်ဖက်ပွေ့နေရ သည် မို့ . .။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ကလဲ ဈန်ရမောင် ရဲ့ အ၀တ်မဲ့ တင်ပါးတွေ ကို ပွတ်သပ်နေရာက အားမလိုအားမရ ဆုတ်နယ် ဖျစ်ညှစ် သည် ။ဈန်ရ သည် ထကြွမုန်ယိုနေသော စိတ်ဆင်ရိုင်း ကို သတိဆင်ခြင်တုံတရား ဆိုတဲ့ ချွန်းမအုပ်နိုင်တော့ ..။ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ခါးမှာ စည်းထားတဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီခါးစည်းကြိုးလေး ကို ဖြုတ်ခါ ည၀တ်အင်္ကျီကို ဖယ်ခွာချွတ် သည် ..။ သတိဝင်လာသော ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် က ..“ဈန်ရ ..အန်တီလေးတို့ အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းထဲ သွားကြရအောင်ကွယ်..ဒီမှာ မကောင်းဘူး ..” လို့ ပြောပြီး ဈန်ရမောင် လက်ကို ဆွဲကာ အပေါ်ထပ် ကို လှေခါးကြီး ကနေ တက် သည် ..။ နှစ်ယောက်စလုံး ကာမစိတ်တွေ အရမ်းဖြစ်ပေါ်နိုးကြွနေကြတာကြောင့် ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ရောက်တာနဲ့ တံခါးပိတ်..ဂျက်ချပြီး သူတို့ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေ ကို တခုမကျန်အားလုံး ချွတ်ပစ်လိုက်ကြပြီး အောက်ထပ်မှာတုံးကလိုဘဲ နှုတ်ခမ်းချင်း ဂဟေဆက်မိကြပြန် သည်။
“ချစ်တယ်..အန်တီလေး ရယ် . .အရမ်းချစ်တယ် ဗျာ…”
“ ဒို့ရောဘဲ..ဈန့်ကို သိပ်ချစ်တယ် ..ဟန်ဆောင် မထားချင်တော့ဘူးကွယ် ..ဒို့ မင်းလေး ကို တအားချစ်နေမိလို့ စိတ်ဝေဒနာ ခံစားမိနေရတာကြာပြီ . .”
အလွန်လှသော ဖြူဖွေးတင်းမာကော့ထောင်နေတဲ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ရင်စိုင်တွေကို ဆုတ်နယ်နေရင်း နို့သီး နီနီလေးတဖက်ကို ငုံကာစို့လိုက် ရာ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်မှာ ခါးလေးကော့ကာအင်းဟင်အင်းဟင် နဲ့ ညည်း သည် ..။ ခါးကော့လိုက်လို့ သူ့ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းအိအိ နဲ့ ဈန်ရ လိင်တန်ထိပ်ဖူးထိကပ် ပွတ်တိုက်သွားကြ သည် ..။ ဈန်ရ လဲ အိပ်ခန်းထဲက အလှပြင် မှန်တင်ခုံ က မီးအရောင် နဲ့ တအားတောင့်တင်းလှပလွန်းနေတဲ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အမွှေးပါးပါးစုစု နဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး ကို မြင်ရသောအခါ အရမ်းထန်သွားပြီး ..သူမကို ကုတင်စောင်းမှာတင်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ ပေါင်ကြားကို ခေါင်းအပ်လိုက်လေသည်..။
“ အို..ဟင့်ဟင့်..ဈန်ရ..ဘာ…ဘာ..ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ ….”
ဈန်ရ သည် သူ့စိတ်ကူးထဲမှာ လုပ်ချင်နေတာကို အခုလို အခွင့်အရေးလဲ ရရော ချက်ချင်းဘဲ အကောင်အထည်ဖေါ်ပါတော့ သည် ..။ ဟိုးတုံးက အန်တီလေး အိမ်မှာ ခြံလာရှင်း ..ကားပြင် ..ဆေးသုတ် လာလုပ်ခဲ့တုံးကအင်မတန်မှ ချောမောလှပ တောင့်တင်းတဲ့ အန်တီလေး ကို ကြည့်ကြည့်ပြီး မဖုံးမကာဘဲ တွေ့နေရတဲ့ အန်တီလေး ရဲ့ လက်မောင်းသား..ခြေသလုံးသားတွေ ရဲ့ နို့နှစ်ေ၇ာင် အသားဖွေးဖွေး တွေကို တပ်မက်လွန်းရပြီး..ဖုံးကာထားတဲ့ အန်တီလေး ရဲ့ ပေါင်တန်တွေ နဲ့ ပေါင်ဂွဆုံကူးယဥက မိန်းမအင်္ဂါကြီး ကို တွေ့ဘူးချင်မိ သည် ..။ စိတ်မှန်းနဲ့စိတ်ကူးကြည့် ပြီး နမ်းရှုံ့ ချင် လျာနဲ့ ယက်ပေးချင်ခဲ့ သည်။
အခုတော့ ဒီစိတ်ကူးတွေ သည် လက်တွေ့ ဖြစ်လာပြီ ..။ စောစောကဘဲ သေသေချာချာ ဆေးကြော ရေချိုးထားတာမို့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ ပေါင်ကြားနေရာတွေ နဲ့ မို့ဖေါင်းတဲ့ အင်္ဂါစပ်လှလှကြီး သည် ဘာအနံ့မှ မရှိဘဲ သန့်စင်နေသည် . .။ဈန်ရ နမ်းပြီ ..။ယက်ပြီ ..။ ပန်းနုရောင် အကွဲကြောင်းကြီး ကို သူ့လျာနဲ့ ယက် ပြီ ..။ အောက်ကနေ အထက်ကို ပင့်ကော်ပြီးယက်လိုက်တာ ..။ပထမဆုံး ဒီအယက် က ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေသည် ..။ ကြက်သီးဖြန်းကနဲ ထသွားရ သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် သည် ယောင်္ကျားမယူ ..ချစ်သူမရှိသော အပျိုကြီး ဖြစ်ပေမဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု အကြောင်းများ မသိသူ..နားမလည်သူတော့ မဟုတ် ..။ သူငယ်ချင်း အရင်းအခြာတွေ တယောက်ပြီးတယောက် ယောင်္ကျားယူကြ..လက်ထပ်ကြ သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် အားကျအောင် သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ
ကို ပြောပြကြဘူး သည် ..။
ရင်တုန်စရာ..စိတ်ထကြွစရာ အိပ်ရာထဲက အတွေ့အကြုံတွေ ကို ခဏခဏဘဲ ကြားခဲ့ရဘူး သည် ..။ သူမ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း သီတာ က အဆိုးဆုံး ..။ ပါးစပ်ကလဲ ဘာကြမ်းသလဲ မမေးနဲ့ ..။ အမြဲ ညစ်တီးညစ်ပတ် ပြောတတ် သည် ..။ သူမ ကြုံတာတွေ အားလုံး ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကို ခရေစေ့တွင်းကျ “ဒီတေးလ် ” ပြောပြောပြလေ့ ရှိ သည် ..။ ဒါကြောင့် မိန်းမအင်္ဂါ ကို ယက်စုတ်ပေးကြတဲ့အကြောင်းတွေ ကို သူမ သိထားပြီးသား ..။ ဘာဂျာမှုတ်သည် လို့ ခေါ်ကြောင်း လဲ ကြားဖူးပြီးသား ..။
အခုတော့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ဘာဂျာအမှုတ်ခံနေရပြီ ..။ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကြုံနေရပြီ..။ လုပ်ပေးနေသူကလဲ သူမ တိတ်တခိုး သဘောကျ..ချစ်မိ..စွဲလန်းနေရသူ လူချောလေး ..။ သူ့လျာကြီး က အဖုတ်ထဲ ပြေးလွှားနေ သည်..။ ဟိုးအတွင်းထဲကိုပါ သူ့လျာချွန်ချွန်ထိပ်ပိုင်းက ၀င်ဝင်လာ သည် ..။ တင်ပါးတွေ ကော့လိုက်လူးလိုက် ယမ်းခါနေရ သည် ..။ သူ..သူ လုပ်တတ်လိုက်တာ ..ဘယ်တုံးကများ လုပ်တတ်နေပါလိမ့်..။ ဟွန်း..ဘယ်မိန်းမတွေနဲ့များ ကြုံဘူးလို့ ဒီလောက် လုပ်တတ်နေပါလ်ိမ့်..။
ဈန်ရမောင် က ဆက်တိုက် ဖိဖိယက်နေရာက ခဏ ရပ်လိုက်ပြီး…“ အန်တီလေး ..ဘာလဲဟင်…” လို့ ခေါင်းမော့ကာ ထူး သည် ..။ “ဈန်….သိပ်သိပ် လုပ်တတ်နေတာဘဲ..မိန်းမတွေ အများကြီး နဲ့ ကြုံဘူးလား …” လို့မေးသည် ..။ ဈန်ရမောင် လဲ ..“ မကြုံဘူးပါဘူး..အန်တီလေး ကိုဘဲ ပထမဆုံး နမ်းဘူးတာပါ . ”လို့ ဖြေသည် ။ှဖြေပြီးတာနဲ့ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ်ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ် ကို ဆက်ပြီး ယက်လေသည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ရဲ့ အော်ညည်းသံ က ခပ်တိုးတိုး ပေါ်ထွက်နေသလို ဈန်ရမောင် ရဲ့ အဖုတ်ယက်သံ က ပလပ် ပြတ်ပြတ် နဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညမှာ သိသိသာသာ ကြားနေရ သည် ..။ ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် မှာ ပထမဆုံး ကြုံဘူးရတာမို့ သူမ အရသာဖူး အစိလေး ကို လျာနဲ့ ယက်ကော်တင်မိလိုက်တိုင်း..တကိုယ်လုံး တုန်ခါခါသွားရ သည် ..။
အကြောပေါင်းတထောင်စိမ့်သွားစေတဲ့ ထိမိတဲ့ အရသာထူးကို ရင်တလှပ်လှပ် နဲ့ ခံစား ရင်း တဆတ်ဆတ်ခါသွားရတဲ့ ကောင်းခြင်းတွေ အကြိမ်ကြိမ် ရရှိ နေရ သည် ..။ ဈန်ရမောင် ရဲ့ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို တအား ဆွဲဆုတ်ထားရင်း တင်ပါးတွေ ကော့ကော့ပေးနေမိရ သည် ..။ အားဟားဟား…အား….အား…အား…….ဈန်..ဈန် ..ဈန်ရယ် …အန်တီလေး …. မင်းကို စွဲနေရအောင် ..လုပ်နေတာလား.အင့်ဟင့်ဟင့်….။အရသာထူး ကို ရရှိခံစားနေရင်း ရုတ်တရက်ကြီး ဈန်ရမောင် ရဲ့ ယက်နေတာ ရပ်ဆိုင်းသွားလို့ မှိတ်ထားတဲ့ သူမမျက်လုံးတွေ မဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင် နဲ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရ သည် ..။ ဈန်ရ သည် စောစောကလို ကုတင်ဘေး မှာ ဒူးထောက်ရက် အနေအထား နဲ့ မဟုတ်တော့ ..။ ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေ သည် ..။
သူ့ပေါင်ကြား ကတုတ်တုတ်ခဲခဲ မတ်မတ်တောင်နေတဲ့ လိင်တန်ကြီး က အကြောကြီးတွေ ထောင်ထနေသည် ..။ ပါးပျဉ်းထောင်
နေတဲ့ မြွေဟောက်ကြီးတကောင်လိုဘဲ ..။အမလေး…ဒေါ်ရွှေရည်ချုပ် ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထသွားရ သည် ..။ သူမ တကယ်ဘဲ ယောင်္ကျား လီး ဆိုတာကြီး နဲ့ ကြုံပြီမို့ ခံလဲခံချင် ..ရင်တွေလဲ အရမ်းတုန် သည် ..။ အပျိုကြီး မမ ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ။
← ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း (၄)
ငါ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် အပိုင်း(၆) →